Izikolo eziPhambili zeFilimu - Izifundo
Iindidi Ze Ukuzivocavoca
Izikolo eziPhambili zeFilimu
Ukuba uphupha ukwenzaIimuvileyo iya kuthandwa zizigidi zabantu, unokufuna ukujonga ukuya kwesinye sezona zikolo zibalaseleyo zefilimu emhlabeni. Ukufumanisa ukuba zeziphi izikolo ezicocekileyo kwisivuno xa kufikwa kwimpumelelo kumzi mveliso wefilimu, iingcali zilinganisela inani lezinto kubandakanya amazinga okuthweswa izidanga, ukuqala umvuzo, iwonga, abalumkileyo ababalaseleyo, kunye nenqanaba ngokhishino. Ezona zikolo zibalaseleyo zeefilimu zihlala zivela kuluhlu oluqulunqwe yi Intatheli yaseHollywood , Ezahlukeneyo , kunye Iphephancwadi iECOWORLD .
Isikolo se-NYU Tisch soBugcisa
Isikolo seTisch soBugcisa , ejolise kubugcisa bemidiya kunye nokwenza ubugcisa, yinxalenye yeYunivesithi yaseNew York yeKholeji yezobuGcisa nezeNzululwazi. Isikolo esidumileyo, esaziwa njengeTisch, sibanga eyona ndawo iphambili kuyo Iphephancwadi iECOWORLD Uluhlu lwezona zikolo zibalaseleyo zefilimu eMelika kunye nenombolo yesibini kwindawo USA namhlanje Iikholeji Uluhlu lwezona zikolo zilishumi zibalaseleyo kwisidanga sefilimu.
Uluhlu lweeFilimu eziPhezulu eziPhezulu
Ireyithi yokwamkelwa kwe-UCLA kunye neemfuno
Izikolo zeArtist Artist
Ukwamkelwa kunye neenkcukacha-manani
Kukho abafundi abangaphezulu kwama-25,000 ababhalise kwi-NYU, kwaye izifundo ziqhutywa kwindawo yase $ 53,000 ngonyaka . Ukuya eTisch, kufuneka uqale faka isicelo kwi-NYU usebenzisa iSicelo esiQhelekileyo, uqinisekise ukuba ungenisa zonke iirekhodi zemfundo kunye namanqaku ovavanyo e-SAT okanye e-ACT. I-Tisch ikhethe kakhulu kwaye ifuna ukuba uphinde uphonononge ubugcisa, ekufuneka ungenise ipotifoliyo ebonisa umdla wakho kunye nobuchule bakho.
Iinkqubo kunye nezinto ezikhethekileyo
Iinkqubo zomdla kwabo banqwenela ukuba ngabenzi beefilimu zibandakanya Izifundo zeCinema , Ukubhala okumangalisayo , kunye Ifilimu kunye nomabonakude . Zonke ezi nkqubo zikhokelela kwiBachelor of Fine Arts (BFA) Degree. UCharlie Rubin , umbhali kunye nomvelisi ophumeleleyo, nguNjingalwazi onxulumene nokuBhala okuDlamkileyo. I-Tisch inamaqhosha anomdla we alumni ebhiyozelwayo , kubandakanya umbhali kamabonwakude kunye nomvelisi uDamon Lindelof, umenzi wefilimu ozimeleyo uJoel Cohen, kunye nabalawuli u-Oliver Stone, M. Night Shyamalan, kunye noMartin Scorsese.
Isikolo se-USC soBugcisa beCinematic
Ukungeniswa njengokhetho oluphezulu Intatheli yaseHollywood Uluhlu lwezikolo ezingama-25 eziphambili zaseMelika, iYunivesithi yaseSouthern California's Isikolo soBugcisa beCinematic Ifumaneka eLos Angeles, California, kufutshane neHollywood, ikomkhulu lemiboniso bhanyabhanya kwihlabathi. Isikolo siphumelele eyona ndawo iphambili kuyo USA namhlanje Iikholeji Uluhlu lwezona zikolo zibalaseleyo zaseMelika zokulandela isidanga sefilimu.
Ukuya ufumane ukungena kwiSikolo soBugcisa beCinematic, kufuneka ufake isicelo kwi-USC usebenzisa iSicelo esiQhelekileyo kwaye ungenise ingxelo ebhaliweyo kunye noMTHETHO okanye amanqaku e-SAT. Inkqubo nganye enxulumene nefilimu ifuna ukuba ungenise isicelo seSlideRoom, esineesampulu zomsebenzi wakho, ipotifoliyo kunye neeleta zengcebiso. I-USC inobhaliso phantse Abafundi abangama-48,000 , Kwaye abagqwesileyo bahlawula i- $ 57,000 ngonyaka kwizifundo.
Isikolo soBugcisa beCinematic sinikezela Iinkqubo zesidanga sokuqala ezinxulumene nemiba emininzi kumzi mveliso wefilimu, nganye ekhokelela kwinqanaba le-BA okanye iBFA. Umbhali wesikrini UWoward A. Rodman nguNjingalwazi kwinkqubo yokuBhala kweFilimu kunye neTelevishini. Abaphumeleleyo kwi-SCA alumni kubandakanya abavelisi uSusan Downey kunye noShonda Rhimes kunye nabalawuli uJon Chu kunye noRick Famuyiwa.
Oopopayi kunye noBugcisa beDijithali ijolise kwindlela yokuzisa oopopayi kunye namabali abo ebomini.
Ubugcisa beendaba kunye nokuziqhelanisa ifundisa abafundi indlela yokusebenzisa itekhnoloji, nokuba kuyilo lwewebhu okanye inyani yokwenyani, ukunxibelelana uluhlu olubanzi lwamabali kunye nemiyalezo kusetyenziswa imithombo yeendaba yedijithali ngokufanelekileyo.
ICinema kunye neziFundo zeMedia igxininisa indlela amakhondo ohlukeneyo kwimizi-mveliso yefilimu asebenza kunye ukwenza indibaniselwano epheleleyo, ukusuka ekubhekiseni ekubhaleni kuye kubaphathi ukuyaimveliso yefilimu.
Imveliso yeFilimu kunye neTelevishini Konke malunga nezibane, ikhamera, kunye nokwenza, ukuphuhlisa izakhono ekudaleni nasekuhleleni ifilimu kunye nevidiyo.
Ukubhalela ifilimu kunye nomabonakude ijolise kwindlela yokwenza izikripthi zefilimu, umabonwakude, imidlalo yevidiyo kunye namaphepha ewebhu.
Iziko laseCalifornia lobuGcisa
Ngo-1961, UWalt noRoy Disney isekwe Iziko laseCalifornia lobuGcisa , ikholeji ebekwe eLos Angeles ebonelela ngeedigri kwezobugcisa bokwenza kunye nokubonakalayo. Isikolo seCalArts seFilimu kunye neVidiyo ikwindawo yesine kwi Iphephancwadi iECOWORLD Uluhlu lwezikolo eziphambili zefilimu, kunye Inkqubo ye- Irhamncwa lemihla ngemihla Igama leCalArts uninzi lwesikolo sobugcisa eUnited States.
izinto zothando ukuxelela intombazana yakho
Kukho malunga Abafundi abayi-1,500 ababhalise kwiiCalArts, kwaye iindleko zokufunda zibiza malunga ne- $ 42,000 ngonyaka. Ukuya faka isicelo kwiiCalArts , kuyakufuneka ufake isicelo kwaye amaxwebhu akho asemthethweni athunyelwe kwiOfisi yoKwamkelwa. Kuya kufuneka ungenise iileta ezintathu zengcebiso kunye neNkcazo yegcisa elichaza iinjongo zakho njengomculi. Isikolo seFilimu neVidiyo sifuna ukuba unikeze ipotifoliyo ukubonisa umsebenzi wakho kwividiyo okanye kwifilimu.
Iinkqubo kwi Isikolo seFilimu neVidiyo kubandakanya iFilimu kunye neVidiyo, oopopayi abavavanyayo, kunye noPhiliso lweMpawu, nganye yazo ekhokelela kwinqanaba leBFA. Xa ujonga uthotho lweopopayi ngu-alumni Alex Hirsch, the ILos Angeles Times kubhekiswa ngothando kwiiCalArts njenge Isikolo soShishino saseHarvard soPhiliso ngenxa yee-greats ezininzi zoopopayi abafumene izidanga zabo apho. Okunye alumni ebalulekileyo kubandakanya abenzi beefilimu uTim Burton kunye noBrad Bird kunye nomlawuli uChris Buck.
Inqanaba lesithathu kwi USA namhlanje Iikholeji Uluhlu lwezona zikolo zibalaseleyo zaseMelika zokulandela isidanga sefilimu, Ikholeji yaseEmerson ikwiBoston, eMassachusetts. Nangona kunjalo, inonxibelelwano olomeleleyo kumzi mveliso wefilimu kwaye inebhongo lenkqubo ebalaseleyo yokufundela umsebenzi ebizwa UEmerson Los Angeles (ELA) enika abafundi abasaqhuba kakuhle kumafilimu ukuba basebenze kwaye benze unxibelelwano eHollywood.
Abafundi abaya kwiKholeji yaseEmerson bahlawula ngeenxa zonke $ 46,000 ngonyaka kwizifundo, kwaye kukho abafundi abayi-3,700 ababhalise esikolweni. Ukufaka isicelo kwiKholeji yaseEmerson, kufuneka ngenisa isicelo Kunye neziqinisekiso zemfundo, kubandakanya imibhalo ebhaliweyo esemthethweni kunye namanqaku ovavanyo e-SAT. Njengomntu ophambili oza kubakho Imveliso yeendaba , Kuya kufuneka ungenise isampulu yemizamo yakho yokuyila, enokuthi ibandakanye ifilimu okanye ividiyo, iklip yeaudio, iskripthi kunye neefoto zedijithali.
Abadlali abanomdla abaya kwiKholeji yaseEmerson banokukhetha phakathi iinkqubo ezintathu zesidanga , zigcinwe kwiSebe lezoBugcisa nezoBugcisa. Iinkqubo zigxininisa ekufundeni ngokwenza amava. Iyaziwa U-Emerson alumni zibandakanya abavelisi bakamabonwakude uKevin Bright noNorman Lear kunye nomphathi wethelevishini uDoug Herzog.
BA kwimveliso ifundisa abafundi malunga nemveliso yemithombo yeendaba kwiindawo ezininzi, kubandakanya ifilimu, ividiyo, iaudiyo, kunye nemithombo yeendaba esebenzayo.
I-BA kwizifundo zeMedia ilungiselela abafundi imisebenzi esekwe kuphando kushishino lokonwabisa, kubandakanya ukugxeka kunye nohlalutyo lwezifundo.
I-BFA kwimveliso yoBugcisa beMedia Ifuna ukuba abafundi bagxile kwimidiya abazikhethele yona, njengefilimu okanye ividiyo, kwaye basebenze nobuchwephesha ekwenzeni iprojekthi yelitye lembombo, elimela incopho yolwazi lwabo olusisiseko kunye nobugcisa.
Isikolo se-UCLA seTheatre, iFilimu, kunye neTelevishini
Inkqubo ye- Isikolo se-UCLA seTheatre, iFilimu, kunye neTelevishini , ekwabizwa ngokuba yi-TFT, ibekwe eLos Angeles, California. Inqanaba lesine kuzo zombini Inkqubo ye- IHollywood Reporter Uluhlu lwezikolo ezingama-25 eziphezulu zaseMelika kunye USA namhlanje Iikholeji uluhlu lwezona zikolo zibalaseleyo zefilimu kweli lizwe. Ukuncedwa yiAkhademi yoBugcisa beMifanekiso yoBugcisa kunye neNzululwazi, i-TFT yayiyeyo Inkqubo yokuqala yaseyunivesithi yohlobo lwayo ukudibanisa izifundo kwimifanekiso eshukumayo, kunomathotholo nakwithiyetha.
Ukwamkelwa kwi-TFT ukhetha kakhulu , nge-8.2% kuphela yabo bonke abafaki zicelo abamkelweyo. Kukho abafundi abangama-269 abasebenza ngeedigri kwi-TFT, zombini izidanga, kunye nesidanga. Ukwamkelwa kwi-TFT njengesidanga sokuqala, kufuneka faka isicelo kwi-UCLA kunye neempendulo zakho ezisemthethweni kunye namanqaku okuvavanya athunyelwe kwi-Ofisi ye-Admissions. Kuya kufuneka ugcwalise isicelo esongezelelweyo kwifilimu nakumabonakude ophambili oya kuthi ubonelele ngesincoko sakho, iileta ezimbini zengcebiso, kunye nesampulu yokubhala. Iindleko zokufunda zibiza malunga ne-16,000 yeedola ngonyaka ukuba uku-state kwaye ujikeleze i-42,000 yeedola ukuba awukho kwimeko. I-UCLA sisikolo esikhulu, esele siphelile Abafundi abangama-46,000 ababhalisile.
Umfundi we-TFT onomdla wokusebenza kumzi mveliso wefilimu kufuneka abaluleke kakhulu Ifilimu kunye nomabonakude . Inkqubo iyalela abafundi kuyo yonke imiba yemveliso yefilimu kunye nomabonakude kwaye ikhokelela kwinqanaba le-BA. Abafundi bafunda imbali kunye ithiyori yazo zombini imveliso yefilimu kunye nomabonwakude; emva koko basebenzela ukuphuhlisa izakhono zobugcisa abazakuzidinga. Le nkqubo ikwagxininisa kubugcisa, obuquka ukubhala, ukwalathisa, ukuhlela nokufota. Umvelisi ophumelele amabhaso UTeri Schwartz NguMlawuli we-TFT. Ialumni egqityiweyo kubandakanya umlawuli kunye nomlingisi uGeorge Takei, umlawuli uJustin Lin, kunye nomvelisi kunye nomlawuli uFrank Marshall.
Isikolo se-LMU seFilimu kunye nomabonakude
IYunivesithi yaseLoyola Marymount Isikolo seFilimu kunye nomabonakude Inqanaba lesithandathu kwi USA namhlanje Iikholeji Uluhlu lwezona zikolo zibalaseleyo zefilimu zaseMelika kunye nenombolo yesibhozo Inkqubo ye- IHollywood Reporter Uluhlu lwezikolo ezingama-25 zezona zikolo zibalaseleyo zaseMelika. Ifumaneka eLos Angeles, California, LMU School of Film and Television lukhetho oluhle kakhulu ukuba ufuna ikhondo lokuzonwabisa. Isikolo sabekwa kwinqanaba inombolo 32 ivuliwe UPhononongo loMsebenzi oPhilayo Uluhlu lweenkqubo ezilungileyo zoopopayi elizweni ngo-2017.
ibukeka njani i-angelfish
I-LMU yiyunivesithi ekumgangatho ophakathi, inabafundi ababhalisileyo abangaphantsi nje kwe-10,000. Kukho malunga 900 abafundi kwiSikolo seFilimu kunye neTelevishini, kwaye ukufundiswa ngonyaka kuqhuba malunga ne- $ 50,000 . Ukuzimasa, kuya kufuneka faka isicelo kwi-LMU , usebenzisa iSicelo esiQhelekileyo okanye usetyenziso lwe-LMU. Kuya kufuneka ube neempapasho zakho ezisemthethweni kunye namanqaku ovavanyo e-SAT okanye e-ACT athunyelwe kwiOfisi yoKwamkelwa, kwaye i-LMU ifuna ileta yengcebiso. Ukuba ucwangcisa uku enkulu yoopopayi , kufuneka ubeke ipotifoliyo yomsebenzi wakho wobugcisa ukuze uyiqwalasele.
Isikolo se-LMU seFilimu kunye neTelevishini sibonelela ngeenkqubo ezintlanu zabafundi abafuna ukusebenza kumzi mveliso wokuzonwabisa: oopopayi, oMveliso, ubuGcisa bokuRekhoda, ukuBhala kwesikrini, kunye neMiboniso bhanyabhanya, Izifundo zeTV kunye neMedia. Abaphumelele kwezi nkqubo bafumana isidanga se-BA, kwaye zontlanu iinkqubo zigxininisa ukusebenzisana kunye nokufunda ngezandla ukuze abafundi bafumane izipho zabo ezizodwa. Ikhuthazwe kakhulu I-alumni ibandakanya umvelisi kunye nomlawuli uDavid Mirkin kunye nabalawuli uJay Oliva kunye noVan Partible.
Isikolo seLodz Film
Isikolo seLodz Film sesinye sezona zikolo zindala zeefilimu, kwaye sisaqhubeka eLodz, ePoland. Isikolo sikwinqanaba lesibini Inkqubo ye- IHollywood Reporter Uluhlu oluphezulu lweZikolo zeMiboniso bhanyabhanya ezili-15.
Zimbalwa kune Abafundi abangama-800 , bobabini abasisigxina nabangesosigxina, abafunda kwisikolo seLodz Film. Izifundo zonyaka omnye ziqala ukusuka $ 10,00 ukuya kwi-15,000 yeedola kubafundi baseU.S. Ukuya ufumane ukungena , kufuneka ungenise isicelo kunye nemibhalo yakho esemthethweni, ekufuneka iguqulelwe kwisiPolish. Kuya kufuneka unikeze ikopi yepasipoti yakho, kwakhona okanye i-curriculum vitae , kunye neefoto ezine. I-Lodz ikwafuna ukuba ungenise ipotifoliyo yobugcisa equlathe ifilimu okanye ividiyo, isishwankathelo sombhalo, umbono wefilimu ebhaliweyo, kunye nothotho lweefoto ezinomxholo. Kuya kufuneka uphumelele uviwo lokungena kwaye ufunde ukuthetha isiPolish.
Izifundo zeLodz Film School Iinkqubo ezine zokufunda . Kwiminyaka emihlanu, abafundi banokufumana isidanga se-MA esiDibeneyo sokuFunda. Isikolo seLodz Film sineqela alumni edumileyo , kubandakanya abalawuli beRoman Polanski kunye neKrzysztof Kiezlowski kunye nababonisa cinema uDariusz Wolski noPawel Edelman.
Isikhokelo seFilimu kunye neTV ijolise ekwenziweni, ekubhaleni nasekuhleleni.
Isikhokelo sokufota kunye neMveliso yeTV igxila kupopayi, iziphumo ezizodwa, ukufota, kunye nemveliso kamabonakude.
Ebambeleyo ilungiselela abafundi ukuba babe ngabadlali bemiboniso bhanyabhanya okanye bakamabonwakude.
Imveliso yoMbutho wezoBugcisa beFilimu ifundisa abafundi malunga nokulungiselela imiba eyahlukeneyo yemveliso yeendaba kunye nendlela ezi zinto zisebenza ngayo kunye.
ISikolo sikaZwelonke seFilimu kunye neTelevishini
Yaziwa njenge-NFTS, i ISikolo sikaZwelonke seFilimu kunye neTelevishini , ebekwe eLondon, eNgilane, lelona ziko liphezulu Inkqubo ye- IHollywood Reporter Uluhlu lwezikolo zefilimu zamazwe aphesheya ezili-15, kwaye ikwabizwa ngokuba sesona sikolo saseNgilani sihamba phambili ngefilimu Iiyunivesithi eziPhezulu .
Kukho ngeenxa zonke Abafundi abangama-250 ababhalise kwi-NFTS, kwaye izifundo ngonyaka isukela kwi- $ 17,800 yabafundi basekhaya ukuya kwi- $ 37,000 yabafundi bamanye amazwe. Ukuya Faka isicelo sokwamkelwa kwi-NFTS, kuyakufuneka ubeke isicelo, kwaye uya kuba nethuba lesicelo sokubonisa umdla wakho kwifilimu kwaye uchaze amava akho obuchule. Esona siqinisekiso sibalulekileyo sokwamkelwa kwiNFTS yitalente, kwaye kuyakufuneka ungenise ipotifoliyo yomsebenzi wakho wokuyila.
I-NFTS ibonelela nge Inkqubo yeMasters kubo bobabini abafundi basekhaya nakwamanye amazwe ababonisa amandla anamandla njengabenzi beefilimu. Inkqubo yeMasters ithatha iminyaka emibini ukuyigqiba kwaye ibandakanya uluhlu olubanzi lwezifundo kunye nezinto ezikhethekileyo ezichaphazelekayo ekwenzeni ifilimu. Abafundi bafunda ngembali yescreen, i-aesthetics, i-cinematografi, ukwalathisa, ukuvelisa, ukuhlela, kunye neetekhnoloji ezinqabileyo ezikhoyo zokuzisa imibono yabo ebomini. Alumni ebhiyozelwayo yeNFTS kubandakanya abalawuli uDario Marianelli, Yann Demange, David Yates, kunye noLynn Ramsay.
Ukuba ukwenza imiboniso bhanyabhanya kukuthanda kwakho, ngokuqinisekileyo uya kufumana umvuzo kwikhondo lefilimu. Ngelixa kungumceli mngeni omkhulu ukuba ungene kumzi mveliso wefilimu kwaye uqaphele iitalente zakho, akukho mathandabuzo ukuba ukuya kwisikolo esaziwayo sefilimu esibhiyozelwa ukugqwesa kuya kukunceda ubhale itikiti lakho uye empumelelweni.
Malunga Izinwele Ulutsha Impilo Imveliso Yekati Iivalentine Imihla Uncedo Donations
Eluhlaza Food Diet Plan
ukudlala ngothando nenkwenkwe
uyinika ntoni inja enesifo sohudo
wenzeni xa ungenalo usapho okanye abahlobo
Ufaka ixesha elingakanani ugoba isalmon
Kutheni le nto iigeminis zitsaleleka kwiscorpio
ezimbini zohlobo lwe-marykate kunye ne-ashley